कल्पनाले नाटक गरेर कती पाइन ? दुइ बिच गोप्य सहमती भएकै हो ठोकुवा सहित आए बासुरी « Niatra TV
कल्पनाले नाटक गरेर कती पाइन ? दुइ बिच गोप्य सहमती भएकै हो ठोकुवा सहित आए बासुरी
काठमाण्डौं,चैत १२ । नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको ‘दोहोरी च्याम्पियन’ आलो,चित बनेको छ । ‘दोहोरी च्याम्पियन’ को पहिलो एपिसियोड नै आलो,चना नै आलो,चनाले भरिएको छ । हजारौँले दिएको डिजिटल अडिसनबाट छनोट भएका ३५ टिमको फिजिकल अडिसन शनिवार प्रसारण गरिएको थियो । ‘दोहोरी च्याम्पियन’ हरेक शनिवार साँझ ८ः५० मा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको छ । पहिलो भाग प्रसारण भएसँगै यो सो आलो,चित बनेको हो । अहिलेसम्म यो सोलाइ तीन लाख बाह्र हजार बढी दर्शकहरूले हेरिसकेका छन् भने, आठ हजार सात सय बढी दर्शकलेसमेत प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘दोहोरी च्याम्पियन’को निर्णायकका रूपमा राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका अध्यक्ष गीतकार रमेश बि.जी लोकदोहोरी गायक प्रजापति पराजुली, लोकदोहोरी गायिका सीता थापा र गायक तथा गीतकार चन्द्र शर्मा रहेका छन् । यस्तै कार्यक्रम सञ्चालकको रूपमा लोकदोहोरी गायक बद्री पङ्गेनी र लोकदोहोरी गायिका प्रीति आले रहेका छन् । यही बिषय लाई लिएर रुपक बासुरी ले आफ्नो क,डा बिचार राखेका छन । हेरौ उनको बिचार –